ပို့စ်မော်ဒန်ဝါဒ (Post-modernism)-အပိုင်း (၁) | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ပို့စ်မော်ဒန်ဝါဒ (Post-modernism)-အပိုင်း (၁)	Posted by mm thinker on January 10, 2008
Posted in: Article, Philosophy.	Tagged: Article, Literature, Philosophy.	2 Comments
ဂျာမနီတွင် ဘော့ဟပ်ဗိသုကာကျောင်းတော် (Bauhus School) သည် အဆောက်အဦပုံစံများရေးဆွဲရေးတွင် အသုံးဝင်အဆင်ပြေမှုကို အလွန်ဇောင်းပေးခြင်း (Extreme Functionalism) ကို ယုံကြည်သည်။(Bauhaus: [Ger., lit. “architecture house”, from Bau = building (bauen=to build) + Haus = house.]) ပို့စ်မော်ဒန်ဝါဒသည် ယင်းယုံကြည်မှုကို ဆန့်ကျင်သော ဗိသုကာဒီဇိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွင် စတင်အမြစ်တွယ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပို့စ်မော်ဒန်အစ ဗိသုကာကဟု ဆိုရမည်။ (မြန်မာပြည်တွင်မှု ပို့စ်မော်ဒန်အစ ကဗျာက ဟု ဆိုကောင်းဆိုရမည်။) ၁၉၇၀ ၀န်းကျင်မှစ၍ ပို့စ်မော်ဒန်ဟူသော အသုန်းအနှုန်းကို အနုပညာပုံစံ၊ ဒဿနဆိုင်ရာနှင့်ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုဆိုင်ရာနှင့်၊ ခေတ်ပြိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ လူမှုဗေဒဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်ရေးသားချက်များတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ သုံးစွဲလာသည်။ Bauhus Architecture School
ပို့စ်မော်ဒန်ဝါဒီဟု မြန်မာပြည်တွင် ၀န်ခံထားသူတို့ပင် မကွဲပြားကြသည့် အချက်တစ်ချက်ကို ဤနေရာတွင် ရှင်းပြချင်ပါသည်။ ပို့စ်မော်ဒန်သည် မော်ဒန်ကို လွန်၍လာခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ဆိုလျှင် မော်ဒန်နှင့် ပို့စ်မော်ဒန် ဘာကွာသနည်း။ အနုရသရေးရာဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု (Aesthetic Movement) ပုံစံအဖြစ်သာရှိသော မော်ဒန်ဝါဒနှင့် လည်းကောင်း၊ ပို၍ကျယ်ပြန့်စွာဆိုရလျှင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဖြတ်သန်းတွေ့ကြုံခဲ့သည့်ခေတ်ကို ကွဲပြားစေရန် ခေတ်ဟောင်း ခေတ်သစ်ခွဲခြားဖော်ပြမှုနှင့်လည်းကောင်း၊ ဤသို့သောမော်ဒန်ဝါဒ၏ သဘောသဘာဝနှင့် ကွဲပြားမှုရှိစေရန်၊ ကတ္တားခြားစေရန် ပို့စ်မော်ဒန်ဝါဒဟု သုံးစွဲရခြင်းဖြစ်သည်။ ပို့စ်မော်ဒန်ဝါဒကို ဖွင့်ဆိုရာ၌ ဤ၀ါဒနှင့်ဆက်စပ်သော သဘောတရားများ၊ ဆက်နွှယ်မှုများအလိုက် ရှုပ်ထွေးများပြားမှုရှိနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် ပို့စ်မော်ဒန်ဖြစ်ခြင်း (Postmodernity) ဆိုရာ၌ သီးခြားနယ်ပယ်ဖြစ်သော ရသဆိုင်ရာမော်ဒန်ဝါဒ ဆိုသည်မျိုးထက် မော်ဒန်ဝါဒတစ်ခုလုံးမှ ဖယ်ခွာထွက်ခြင်း၊ စည်းဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝေဖန်ဆန်းစစ်သည့်ရှုထောင့်မှ ပိုင်းဖြတ်လေ့ရှိသည့် ဖွဲ့တည်မှုလွန်ဆန်းစစ်ဝါဒ (Post-Structuralism) သည် ပို့်စ်မော်ဒန်ဝါဒနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ခရီးဆက်လေ့ရှိသည်။ ဤသို့ရှုပ်ထွေးခြင်းကြောင့် ရှိလာသော အခက်အခဲမှာ ပို့စ်မော်ဒန်လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားနေသော စာရေးဆရာများ (ဥပမာ-မိုက်ကယ်ဖိုးကောလ်၊ ဂျက်ခ် ဒါရီးဒါး) တို့က ပို့စ်မော်ဒန်သမားဟု တံဆိပ်ကပ်ခံရခြင်းအပေါ် ဝေဖန်ခြင်း၊ လက်မခံလိုခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သို့ဆိုစေ ယေဘုယျအကျဆုံးဖွင့်ဆိုချက်အားဖြင့် ပို့စ်မော်ဒန်ဝါဒဆိုသည်မှာ ယခင်ရှိဖူးသော `မော်ဒန်´အမျိုးမျိုးမှ ဖယ်ခွာပုံစံချလာခြင်းဖြစ်သည်။ အနုပညာလက်ရာ၊ စာပေလက်ရာတွင် ပို့စ်မော်ဒန်သည် ဘယ်လိုရပ်တည်နေရာယူသလဲဟု မေးဖို့ရှိသည်။ ပို့စ်မော်ဒန်ရှုထောင့်မှ စေဖန်မှုသည် များသောအားဖြင့် သမိုင်းဆိုင်ရာကို အခြေခံသော စတိုင်လ် (ဟန်) မှ ခွဲထွက်ပြောဆိုခြင်း၊ နည်းအယူအဆ ပြောင်းလဲမှုကို အဖြေရှာခြင်း၊ အနုပညာလက်ရာ စာပေလက်ရာတို့တွင် ပါနေသည့် သုံးစွဲသော တန်ဆာပလာ၊ အဆင်တန်ဆာ၊ ပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်း၊ ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းကို အဖြေရှာခြင်းနှင့် ပန်းချီ ပန်းပုဆရာ (သို့) စာရေးဆရာ၏ ပြန်လည်ခံစားတင်ပြမှု (Reproduction) ၌ အဖြေရှာခြင်းဖြစ်သည်။ (ဖတ်ရင်း တော်တော်တော့ မျက်စိလည်သွားမည်ထင်သည်။ ထွေလီကာလီတွေမပါဘဲ စားပွဲထိုးနားလည်သော စကားနှင့်ပြောရလျှင် စာပေအနုပညာလက်ရာတွေကို ဝေဖန်ရာတွင် ပတ်ပျိုး ယိုးဒယားတွေ စာဟန်ပေဟန်တွေနှင့် ညှိမနေ၊ လက်ရှိ အနုပညာသမား ဘာလုပ်ထားသည်၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးမှု ဘယ်လောက်ရှိသည်ဆိုတာပဲ ဂရုစိုက်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။) Pastiche, Intertexuality စသည်ဖြင့် ဤသဘောတရားကို ရည်ညွန်းရန် တစ်ခါတရံ သုံးစွဲလေ့ရှိသည်။
← ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ကျောင်းသားပါတီ (နှစ်ခက်တာ)	ကိုယ့်စိတ်ကို တူးဆွခြင်း →	2 comments on “ပို့စ်မော်ဒန်ဝါဒ (Post-modernism)-အပိုင်း (၁)”
မောင်ဘကောင်း on January 11, 2008 at 12:51 am said:
ဘလော့တွေ သိပ်သွားဖြစ်လေ့မရှိ ရင်းနှီးလေ့မရှိပေမယ့် ကိုသင်ကာဆီ တော့ လာလာလည်ဖြစ်တယ်။လာလည်ရင်းနဲ့ ပို့စ် မော်ဒန်ကို ဖတ်သွားပါတယ်။ ကိုသင်ကာ ဘောင်းဟောက်စ်(Bauhaus) လို့ စလုံးပေါင်းတယ်ထင်တယ်။
ကျွန်တော့ရဲ ပေါကလီး ပို့စ်မှာ လည်းဖတ်လို့ရပါတယ်။
Reply	ပြည်သား on January 17, 2008 at 5:26 am said:
extra-post အကြောင်းလေးတွေလည်း သိချင်သေးသဗျ။
Myanmar Sar	Blog Stats	254,629 License	MM Free Thinker by mm thinker is licensed underaCreative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.Based onawork at mmfreethinker.wordpress.com.Permissions beyond the scope of this license may be available at https://mmfreethinker.wordpress.com/. Myanmar Knote Credit-Art House Graphic Studio, Mandalay, Myanmar. Createafree website or blog at WordPress.com.